China ezinamacala ucingo umnatha machine Ukwenziwa kunye Factory | Oomatshini baseYoute
Ezinamacala wocingo Machine
Ezinamacala wocingo yi wocingo ezenziwe beveled wocingo (ezinamacala) ephothiweyo iingcingo zesinyithi. Ubukhulu becala locingo olusetyenzisiweyo luyehluka ngokobungakanani becingo ezinamacala amathandathu. Iigridi ezincinci ezinamacala amancinci kunye neesinyithi zentsimbi zihlala zisebenzisa iingcingo zentsimbi enobubanzi be-0.4-2.0 mm, kwaye ezo zinomaleko wePVC zihlala zisebenzisa iingcingo zetsimbi zePVC ezinobubanzi obungu-0.8-2.0 mm. Olu hlobo lomnatha onamacala asetyenziswa ngokubanzi kumnatha wokuzahlula wedwa wefama, ucingo lwamadlelo, ikheyi yezilwanyana kunye nokomeleza udonga. Le yimveliso ethembisayo.
I-LSW entle kunye ne-negative ephothiweyo yesinyithi enamacala enemigca eveliswa ngumzi-mveliso wethu luhlobo olutsha lwe-mesh loom oluthatha itekhnoloji yangaphandle kunye nolwakhiwo, yamkela itekhnoloji yokuqhubekeka yasekhaya, kwaye ineempawu zayo ezizodwa. Olu luhlu lweemveliso zamkela itekhnoloji yokuluka yomgaqo ohamba phambili kunye nomva wokuvelisa ngokuthe ngqo umnatha osisinyithi onamacala alungele imigaqo yomluki. Okwangoku kukho iintlobo ngeentlobo zeemodeli ezinje nge-1/2 intshi, 3/4 intshi, 1 intshi, 1.2 intshi, 1.5 intshi, 2 intshi, 3 intshi, njl. Oomatshini abahlukeneyo kunye nezixhobo nazo zingenziwa ngokwezifiso ngokweemfuno zabathengi. Isinyithi ezinamacala omatshini womatshini wokuluka uneempawu zoyilo olufanelekileyo, ulwakhiwo olulula, ukusebenza okuzinzileyo, ukusebenza kakuhle, inzuzo ephezulu kunye nolondolozo olufanelekileyo. Zithunyelwa eYurophu, eMelika, mpuma Asia, kuMbindi Mpuma, Afrika kunye namanye amazwe kunye nemimandla.
Iiparamitha ezisisiseko zobugcisa
Bathi: Ngaba ukuvelisa uhlobo elicwangcisiweyo
1.With isixhobo bamba waqhekeza, oko uyakwazi ukubaleka, umatshini isebenza kakuhle kwaye ingxolo iphantsi;
2. Fakela isixhobo sokumisa esizenzekelayo kunye nekhawuntara. Xa ucingo olwaphukileyo lwenzeka ngexesha lenkqubo yokuluka umatshini, umnatha owaphukileyo okanye ubude bemitha buya kuyeka ngokuzenzekelayo xa busendaweni, kunye nealam; ukunciphisa umnatha owaphukileyo kunye nokuphucula ukusebenza kwemveliso;
3. Umnatha ucocekile kwaye ulingene, kwaye unokuqiniswa embindini wawo nawuphi na umnatha ukomeleza uqine lomnatha;
4. Lo matshini kufakwa inkqubo ukuthambisa ajikeleze oluzenzekelayo, nto leyo yamkela ukuthambisa ajikeleze embindini, nto leyo elula ngakumbi ukuba ukusebenzisa;
5. Ububanzi bomnatha, ububanzi bomatshini 2.6mm-6mm, unokuluka iminatha emininzi ngaxeshanye, ukwandisa imveliso ngokufanelekileyo.
I-Hexagonal mesh ibizwa ngokuba yimigca ephothiweyo, i-mesh yokugquma, kunye ne-mesh ethambileyo. Lo mnatha mncinci onamacala ubukhulu becala usetyenziselwa ukondla iinkukhu, amadada, amarhanisi, imivundla kunye nezocingo lwezilwanyana, oomatshini bokukhusela, iingcingo zendlela, iingcingo zebala lezemidlalo kunye neenethi zokukhusela ibhanti eluhlaza, ukutyala ithambeka (ukwenza uhlaza), intaba yamatye ejinga iminatha yokutshiza njl. umnatha wocingo wenziwe isitya esimile okwebhokisi, ibhokisi yomnatha izaliswe ngamatye anesiphithiphithi, njl njl, ezinokusetyenziselwa ukukhusela nokuxhasa ukugoba kolwandle, iinduli, iindlela, iibhlorho, amadama kunye nezinye izinto zobunjineli. Sisixhobo esilungileyo solawulo lwezikhukula kunye nokumelana nezikhukula.
1. ezinamacala umatshini wocingo
3. Ukuma kweSpool
4. umatshini oyinkampani
5. Ukuma ngocingo oluqinileyo
Egqithileyo Oluzenzekelayo ezinamacala umatshini wocingo
Okulandelayo: Umatshini weNetwork waseGadini
Zenzekelayo Plc ezinamacala Wire elenze kamatshini
Chicken Cage ezinamacala Machine
Ezinamacala Chicken wocingo Machine
Ezinamacala enemingxuma Machine
Ezinamacala wocingo ukwaluka Machine
Ezinamacala wocingo Machines
Ezinamacala wocingo wocingo Machine
Tye Kwaye Reverse ezijijekileyo ezinamacala wocingo Machine